Everton oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates… +SAWIRRO – Gool FM
Everton oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates… +SAWIRRO
(London) 23 Abriil 2021. Everton ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar ka tirsaneyd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Arsenal iyo Everton ku kala nasteen bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 76-aad kooxda Everton ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, kaddib markii uu gool iska dhaliyay goolhaayaha naadiga Arsenal ee Bernd Leno, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 0-1.
Ugu dambeyntii dheesha ayaa ku dhamaatay 0-1 ay kaga soo adkaatay Everton kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates, Gunners ayaa haatan kaga jirta dhanka jadwalka horyaalka booska 9-aad, halka Everton ay fadhiso kaalinta 8-aad.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Arsenal iyo Everton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Horudhac: Liverpool vs Newcastle United... (Reds oo maanta guul u baahan si ay u gasho afarta sare ee Premier League)